PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - Umisiwe umfundi
Ilanga - 2018-10-25 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE noNOMFUNDO NGWANE
ZINCOME uhlelo olulandelwe yisigungu sesikole izikhulu zoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal ngokumiswa komfundi waseLihlithemba High School, eNdwedwe, ILANGA elibike ngaye ngoMsombuluko ukuthi ushaye isekela likathishanhloko, uMnu Bhekani Mthethwa, kade lizama ukumlamula elwa nomunye ngoLwesihlanu olwedlule.
UNgqongqoshe wezeMfundo kulesi sifundazwe, uMnu Mthandeni Dlungwana neNhloko yoMnyango, uDkt Enoch Nzama, baziyele mathupha kulesi sikole ngoLwesibili emuva kokubona lolu daba kuleli phephandaba ngoMsombuluko beyozwa kabanzi ngalesi sigameko sokuvuka kukathisha othulini.
Bese kusabalele ne- video eveza uthisha eyobhamazeka phansi.
UDkt Nzama uncome konke okwenziwe yisigungu wathi uma kunezimo ezifana nalesi, kumele isigungu esilawula isikole siqondise izigwegwe kumfundi kubhalelwe yena ngesinqumo esithathiwe lapho ukuze ezoxosha loyo mfundi.
“Konke enikwenzile kuyancomeka kakhulu ngokulandela kwenu umgomo obekiwe futhi kalikho icala esilibeka uthisha ngoba kuyavela ukuthi ubelamula izingane ebezilwa esikoleni kanti uzothola amachaphazelo, lokho kusho ubuqhawe,” kusho uDkt Nzama.
UMnu Mthethwa utshele izikhulu zomnyango ukuthi umfundi akazange amshaye kodwa ubezama ukulamula wabe eseshibilika wawa.
Ibamba likathishanhloko, uMnu Thulani Zwane, lithe izigameko ezimbi ezenziwe yilo mfundi besezevile kwezine ekhuzwa kodwa engalawuleki. Lithe ngelinye ilanga kuke kwavinjwa abantu abebefuna ukungena nezibhamu esikoleni befuna ukusoconga yena lo mfundi obebuye esabise ngokuthumba ozakwabo.
“Njalo uma kuliwa, lo mfundi ubehlale ephambili. Maningi amacala akhe kangangokuba ubesesayiniswe ngisho isexwayiso sokugcina,” kusho uMnu Zwane.
UMnu Dlungwana uthe othisha kumele bavikelwe njengoba kuvikelwa abafundi. Uthe kunenkolelo ethi kabavikelwa othisha, okuyinto afuna iphele.
“Lungethuse kakhulu lolu daba ngathi ngeke ngihlale phansi, yingakho ngizifikele mathupha ngazozizwela ubuqiniso balesi sigameko. Ngikholwa wukuthi isinqumo esithathiwe (sokumiswa komfundi) sihle kakhulu ngoba kulandelwe yonke imigomo yokuqondiswa komfundi izigwegwe ngoba leli gongo lomfundi sekuzwakele ukuthi beliwuhlupho,” kusho uMnu Dlungwana.
Uthe usexoshe abafundi abane kulesi sifundazwe okubikwe izigameko zokungaziphathi kahle kwabo. “Omunye wabo simxoshile esikoleni sakhe kodwa ngenxa yokuthi ubebhala umatikuletsheni, simenzele uhlelo lokubhalela kwesinye isikole ukuze singalimazi ikusasa lakhe,” kusho uMnu Dlungwana.